Virgil Van Dijk Oo Soo Xushay Shaxda Kooxdiisa Shan-geesoodka Ah Iyo Labadan Xiddig Oo Uu Uga Dhaartay - GOOL24.NET
Virgil Van Dijk Oo Soo Xushay Shaxda Kooxdiisa Shan-geesoodka Ah Iyo Labadan Xiddig Oo Uu Uga Dhaartay
Difaaca Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa soo xushay kooxdiisa shan geesoodka ah ee waqtigan ugu fiican dunida, waxaana uu boos uga waayey xiddigaha Portugal iyo Argentina ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo uu meesha ka saaray.
Ka hor ciyaarta finalka Champions League ee Sabtida ay la ciyaarayaan Real Madrid, Van Dijk ayaa ka jawaabay su’aalo uu weydiinayay halyeygii Manchester United ee Rio Ferdinand kaas oo horena ay iskugu dareen min shantii difaac ee ugu fiicnaa taariikhda horyaalka Premier League oo uu midba midka kale ku soo daray.
Kabtanka xulka qaranka Netherlands ayaa garab maray oo aan soo hadal qaadin Lionel Messi oo toddoba jeer ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or iyo Cristiano Ronaldo oo shan jeer kusoo guuleystay, xilli uu ka jawaabayay su’aal ahayd inuu magacaabo koox ka kooban shan ciyaartoy oo waqtigan dunida ugu fiican.
Jawaabta uu bixiyey Van Dijk ayaa waxay tusaale u tahay in la gaadhay waqtigii ay Lionel Messi iyo Ronaldo iska illoobi lahaayeen inay kusii hammiyaan inay ku tartamaan abaal-marinnada ay sannadaha badan soo guranayeen ee Ballon d’Or iyo kuwa kale ee loogu aqoonsanayay ciyaartoyda ugu wanaagsan.
Virgil van Dijk waxa kale oo uu muujiyey, in ciyaartoyda ugu wanaagsan dunida ay waqtigan u badan yihiin horyaalka Premier League, hase yeeshee waxa uu iska indho-tiri kari waayey inay jiraan laacibiin kale oo wanaagsan oo horyaallada kale ka ciyaara.
Waxa uu xulashadiisa koowaad ka dhigtay, goolhayaha Liverpool iyo xulka Brazil ee Alisson Becker oo uu goolhaye uga dhigay kooxdiisa shan geesoodka ah, halka xiddiga kooxda ay xafiiltamaan ee Kevin de Bruyne uu isagana kusoo darsaday liiskiisa.
Van Dijk oo marar badan ay iska hor yimaaddeen De Bruyne, ayna ku xafiiltameen hanashada horyaalka oo toddobaadkan horraantiisii ay Man City ka qaadday, waxa uu qiray in xulashada iyo qirista heerka uu ciyaartoyga gaadhsiisan yahay iyo tartanka lagu wada jiraa aanay wax saamayn ah isku lahayn.
Dhinaca weerarka, waxa uu Van Dijk oo 30 jir ahi soo xushay weeraryahannada reer France ee Kylian Mbappe oo Paris Saint-Germain ah iyo Karim Benzema oo ka tirsan Real Madrid, Sabtidana ay ku dagaallami doonaan finalka Champions League.
Difaaca ayaa uu isagu isku dooray, balse mar la weydiiyey sababta uga tegay Messi ayaa waxa uu ku jawaabay: “Waxa aan ka hor tegay Sergio Aguero oo ahaa ciyaartoy aan la rumaysan karin! Waxa aan ka hor tegay Lionel Messi oo lagu murmo inuu yahay ciyaartoyga ugu wanaagsanaataariikhda kubadda cagta, laakiin aniga fikirkayga, Kylian Mbappe ayaa ah ciyaartoy ka duwan oo orod badan.
“Waa weeraryahan noociisu ka duwan yahay oo aanu iska hor nimid. Sida Erling Haaland, Darwin Nunez ayaa iyaguna sidiisa oo kale ah. Waa ciyaartooyo degdeg badan, toos ah, xooggan wayna adag tahay inaad waajahdo wiilal sidaas oo kale ah.”